Op-ed - ဘယ်သူကညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေနဲ့ပတ်သက်တဲ့သိပ္ပံပညာကိုအတိအကျတလွဲဖော်ပြနေတာလဲ။ - Porn တွင်သင်၏ ဦး နှောက်
ငါ Salt Lake သတင်းစာမှအောက်ပါ "အယ်ဒီတာမှစာတစ်စောင်" "သက်သေ" porn အသုံးပြုမှုကိုအဘယ်သူမျှမပြဿနာများကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်များနှင့်ညစ်ညမ်းစွဲမတည်ရှိပါဘူးအဖြစ်ကိုးကားထားပြီးဘယ်လောက်အကြိမ်ပေါင်းများစွာသငျသညျမပြောနိုင်: Op-Ed: Anti-porn ကျောင်းကအစီအစဉ်ကိုသိပ္ပံဂေါ်။ YBOP၊ Fight the New မူးယစ်ဆေးဝါးသို့မဟုတ်အခြားသူများသည်လက်ရှိသုတေသနအခြေအနေကိုတလွဲထင်မြင်မိခြင်းသို့မဟုတ်လေ့လာမှုများအားမှားယွင်းစွာဖော်ပြခြင်းသာဓကအဖြစ်၎င်းသည်လူမှုမီဒီယာများ (Quora, Twitter, Facebook) တွင်မကြာခဏတင်လေ့ရှိသည်။ မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်ရေးသားသူ၏ PhD သူငယ်ချင်းများအဖြစ်တရားဝင်ပုံရသည် နီကိုးလ် Prause ကအပေါ်လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့သည်။
၎င်းသည်“ မူးယစ်ဆေးဝါးအသစ်ကိုတိုက်ဖျက်ခြင်း” သို့မဟုတ်အခြားမည်သူတစ် ဦး တစ်ယောက်မှမမှန်မကန်ဖော်ပြခြင်းဥပမာများကိုဖော်ပြထားသည် ။75
အဆိုပါ 8 အာရုံကြောဆိုင်ရာသိပ္ပံပညာရှင်သုညမှ neuroscience-based လေ့လာမှုများထောက်ပြသည်။
သုတေသီများ၏အဘယ်သူမျှမအစဉ်အဆက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့လေ့လာမှုတစ်ခုထုတ်ဝေခဲ့ပါသည် "ညစ်ညမ်းစွဲ။ " မှန်ကန်ကြောင်းအတည်ပြု
Op-Ed လက်မှတ်ထိုးသူအချို့ရှိသည် ထက်ထက်သန်သန် porn နှင့်လိင်စွဲလမ်း၏အယူအဆတိုက်ခိုက်ခြင်း၏သမိုင်း (အရှင်ကာလတုန်းကမရခဲ့ဘူးဘက်လိုက်မှုသရုပ်ပြ) ။
အများစုမှာခဲ Op-Ed က (Prause) ၏စာရေးဆရာသို့မဟုတ်သူမ၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် (နှင့်အတူပူးပေါင်းခဲ့Pfaus).
ဤစကားလုံး ၆၀၀ ပါ Op-Ed သည်လူအများသုံးရန်လှည့်စားရန်မရည်ရွယ်သည့်အခိုင်အမာပြောဆိုမှုများနှင့်ပြည့်နှက်နေသည်။ စာရွက်စာတမ်း ၄ ခုသာဖော်ပြထားသောကြောင့်၎င်းသည်တစ်ခုတည်းသောအခိုင်အမာကိုထောက်ခံရန်ပျက်ကွက်သည်။ အဘယ်သူအားမျှ porn စွဲလမ်းမှု၊ ဆက်ဆံရေးအပေါ်ညစ်ညမ်းမှု၏ဆိုးကျိုးများ၊
ငါနှင့်ဤလယ်ပြင်၌အခြားကျွမ်းကျင်သူများကိုအောက်တွင်တစ်ဦးအတော်လေးတိုတောင်းသောတုံ့ပြန်မှုအတွက်၎င်း၏အခိုင်အမာနဲ့အချည်းနှီးသောအပြောအဆို debunked ။ : အကို "Op-Ed ၏အာရုံကြောဆိုင်ရာသိပ္ပံပညာရှင်" ကျနော်တို့ကအောက်ပါအများအပြားအပါအဝင်ရာပေါင်းများစွာသောလေ့လာမှုများနှင့်စာပေမျိုးစုံကိုပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း, ကိုးကားမတူဘဲ
55 မှ neuroscience-based လေ့လာမှုများ (MRI, fMRI, EEG, neuropsychological, ဟော်မုန်း) သည်စွဲမော်ဒယ်ခိုင်မာသောထောက်ခံမှုပေး။
32 မကြာသေးမီကစာပေပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း & ဝေဖန်သုံးသပ်ချက် ကမ်ဘာပျေါတှငျထိပ်အာရုံကြောဆိုင်ရာသိပ္ပံပညာရှင်အချို့တို့က, အညစ်ညမ်း-စွဲမော်ဒယ် supporting ။
porn အသုံးပြုမှု / လိင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာများစွဲခြင်းနှင့်နိမ့် arousal ချိတ်ဆက် 45 လေ့လာမှုများကျော် လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုရန်။
လေ့လာမှု ၇၅ ခုကျော်ကညစ်ညမ်းမှုကိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာရော၊
porn ကိုအသုံးပြုခြင်း (သည်းခံစိတ်) ၏တင်းမာမှုနှင့်ကိုက်ညီတွေ့ရှိချက်, porn ဖို့လေ့နှင့်ပင်ဆုတ်ခွာလက္ခဏာတွေသတင်းပို့ 60 လေ့လာမှုများကျော်.
လေ့လာမှု ၅၅ ခုကျော်ကညစ်ညမ်းမှုကိုစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးနှင့်ပိုမိုညံ့ဖျင်းသောသိမြင်မှုရလဒ်များနှင့်ချိတ်ဆက်ထားသည်။
အနည်းဆုံးလေ့လာမှု ၂၅ ခုတွင်လိင်နှင့်ညစ်ညမ်းသောစွဲသူများသည်“ မြင့်မားသောလိင်ဆန္ဒရှိ” သည်ဟုဆိုကြသည်။
40 လေ့လာမှုများမှတစ်ဆင့်ညစ်ညမ်းမှုကိုအမျိုးသမီးများနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအယူအဆများအပေါ်“ မညီမျှသောသဘောထားများ” နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသည်။
အဘယ်အရာကိုညစ်ညမ်းအသုံးပြုခြင်းနှင့်မြီးကောင်ပေါက်ကောအသို့နည်း ၏ဤစာရင်းကိုထုတ်စစ်ဆေး 280 ဆယ်ကျော်သက်ကလေးကိုလေ့လာမှုများကျော်, ဒါမှမဟုတ်စာပေဤပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း: ပြန်လည်သုံးသပ် # 1, review2, ပြန်လည်သုံးသပ် # 3, ပြန်လည်သုံးသပ် # 4, ပြန်လည်သုံးသပ် # 5, ပြန်လည်သုံးသပ် # 6, ပြန်လည်သုံးသပ် # 7, ပြန်လည်သုံးသပ် # 8, ပြန်လည်သုံးသပ် # 9, ပြန်လည်သုံးသပ် # 10, ပြန်လည်သုံးသပ် # 11, ပြန်လည်သုံးသပ် # 12, ပြန်လည်သုံးသပ် # 13, ပြန်လည်သုံးသပ် # 14, ပြန်လည်သုံးသပ် # 15, ပြန်လည်သုံးသပ်မှု # 16.
FTND မှကိုယ်စားပြုသောလေ့လာမှုတစ်ခုအား Prause ကကိုးကားရန်မစွမ်းနိုင်ကြောင်းအတည်ပြုခဲ့သည် အသုံးပြုသူ SB လေ့လာမှု FTND လွဲဖော်ပြကိုးကားနှင့်ကိုဖော်ပြရန် Prause စိန်ခေါ်ရှိရာကဒီ twitter ချည်။ Prause မျှအဖြေရှိပါတယ်:
YBOP FTND အတုမူကြောင်းကိုတစ်ခုတည်းလေ့လာမှုအမည်ကိုမှ Prause များအတွက်5နှစ်ကျော်စောင့်ဆိုင်းလျက်ရှိသည်။ သို့တိုင်စောင့်ဆိုင်း။
နောက်ဆုံးအနေနဲ့စာဖတ်သူကို Prause တစ်ဦးနှင့်အတူဟောင်းတစ်ဦးပညာသင်နှစ်ကြောင်းကိုသတိထားမိဖြစ်သင့် ရှည်လျားသောသမိုင်း အင်တာနက်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကနေပျက်ဆီးအထောက်အထားအစီရင်ခံရန်ဝံ့တဲ့သူစာရေးဆရာ, သုတေသီများ, ကုသ, သတင်းထောက်များကိုနှင့်အခြားသူများနှောင့်ယှက်၏။ သူမသည်ဖြစ်ပေါ်လာသော အဆိုပါညစ်ညမ်းစက်မှုလုပ်ငန်းနှင့်အတူအတော်လေးအဆင်ပြေနေ, ဒီထဲကနေမြင်နိုင်ပါသည်အဖြစ် X-အဆင့်သတ်မှတ်ထားသည်ဝေဖန်သူများအဖွဲ့အစည်း (XRCO) ဆုအခမ်းအနား၏အနီရောင်ကော်ဇောပေါ်သူမ၏၏ပုံရိပ် (ညာဘက်အစွန်ဆုံး)။ (ဝီကီပီးဒီးယား t ကိုအလိုအရhe XRCO ဆုပေးပွဲ အမေရိကန်ကပေးတဲ့နေကြတယ် X-အဆင့်သတ်မှတ်ထားသည်ဝေဖန်သူများအဖွဲ့ နှစ်စဉ်စက်မှုလုပ်ငန်းအဖွဲ့ဝင်များအတွက်သီးသန့် reserved လူတွေအရွယ်ရောက်ပြီးသူဖျော်ဖြေရေးအတွက်အလုပ်လုပ်နှင့်စက်မှုလုပ်ငန်းဆုကိုပြသတစ်ခုတည်းသောအရွယ်ရောက်ပြီးသူဖြစ်ပါသည်မှ.) ။ ဒါဟာအစ Prause ရှိစေခြင်းငှါပုံပေါ် ဘာသာရပ်များအဖြစ်ရရှိသော porn အဆိုတော် အခြားညစ်ညမ်းစက်မှုလုပ်ငန်းအကျိုးစီးပွားအုပ်စုတစ်စုကတဆင့်, အ အခမဲ့ခွန်းညွန့်ပေါင်း။ FSC မှရရှိသောဘာသာရပ်များကိုသူမတွင်အသုံးပြုခဲ့သည် ငှားရမ်း - သေနတ်လေ့လာမှု ထိုအပေါ် အကြီးအကျယ်စှနျး နှင့် အလွန်စီးပွားဖြစ်ဖြစ်သော“ Orgasmic Meditation” အစီအစဉ် (ယခုဖြစ်ခြင်း FBI ကစုံစမ်းစစ်ဆေး) ။ ချီးမွမ်းခြင်းကိုလည်းပြုလုပ်ခဲ့သည် မထောက်ပံ့တောင်းဆိုမှုများ အကွောငျး သူမ၏လေ့လာမှုများ၏ရလဒ်များကို နှင့်သူမ၏ လေ့လာမှုရဲ့နည်းစနစ်။ ပိုပြီးစာရွက်စာတမ်းများအဘို့အတွေ့: နီကိုးလ် Prause သြဇာလွှမ်းမိုးမှုအတွက် Porn စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များအားဖြင့်ဖြစ်သနည်း
Update ကို (ဧပြီလ, 2019): YBOP ရဲ့ဝေဖန်မှုနှုတ်ပိတ်ရန်ကြိုးပမ်းမှုများတွင်တစ်ဦး Self-ကွှေးကျွောကျွမ်းကျင်သူများ၏လက်တဆုပ်စာ YBOP ၏ကုန်အမှတ်တံဆိပ်ကိုခိုးယူရန်အုပ်စုတစ်စုကိုဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။ အံ့ ising စရာကအံ့သြစရာကောင်းတာကဒီအုပ်စုကို Nicole Prause က ဦး ဆောင်ပြီး၊ အခြားရွေးချယ်စရာစာရေးဆရာများဖြစ်တဲ့ Janniko Georgiadis, Erick Janssen နှင့် James Cantor တို့ပါ ၀ င်သည်။။ အသေးစိတျအဘို့ဤစာမကျြနှာကိုကြည့်ပါ: Porn စွဲ Deniers (www.realyourbrainonporn.com) ကလဲဆင်နွှဲခဲ့ပါသေးတယ်ရန်လိုအမှတ်တံဆိပ်ချိုးဖောက်မှု။ သင်အောက်ပါဝေဖန်မှု၌ဤစာမျက်နှာစစ်ဆေးလို့မရပါဘူးတဲ့လေ့လာမှုတစ်ခုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာရှာနေနေတယ်ဆိုရင်: porn သိပ္ပံ Deniers မဟာမိတ်အဖွဲ့ (AKA: "RealYourBrainOnPorn.com" နှင့် "PornographyResearch.com")။ ဒါဟာသူ့ရဲ့ချယ်ရီ-ကောက်ယူဘေးထွက်မသိချင်ယောင်အဆောင်လေ့လာမှုများ, ဘက်လိုက်မှု, ကွာဟပျက်ကွက်နှင့်ပရိယာယ်အပါအဝင်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်ချိုးဖောက်မှု '' 'သုတေသနစာမျက်နှာ "ကို examine ။
8 အာရုံကြောဆိုင်ရာသိပ္ပံပညာရှင်၎င်းတို့၏တောင်းဆိုမှုများကိုထောကျပံ့ဖို့တစ်ခုတည်း neuroscience လေ့လာမှုကိုးကားရန်ပျက်ကွက်
ရွှံ့စေး Olsen, GAIL ထမင်းစားခန်း, မာရိအန်း Layden, ဂယ်ရီ Wilson က, ကို Jill Manning, Donald ဟီလ်တန်နှင့်ယောဟန် Foubert အားဖြင့်
သိပ္ပံအဓိပ္ပါယ်ကောက်လွဲမှားအောင်၏စွဲချက်လေးနက်ဖြစ်ကြသည်။ ကျနော်တို့ကတုန့်ပြန်ရေး မကြာသေးမီ Op-Ed'' s ကို၏ဝေဖန်မှု သစ်မူးယစ်ဆေးတိုက်ဖျက်ရေးအတွက်'' s ကိုသိပ္ပံနည်းကျတောင်းဆိုမှုများ။ အဲဒီအစားထက်မျှသာ "တက်ကြွလှုပ်ရှားသူများက" Op-Ed စာရေးဆရာများကျွန်တော်တို့ကိုတံဆိပ်ကပ်အဖြစ်ကျနော်တို့ညစ်ညမ်းခြင်းဖြင့်ထိခိုက်သူတွေကိုသုတေသနသို့မဟုတ်ကူညီပေါင်းစပ်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အတွေ့အကြုံအချို့ 130 နှစ်ပေါင်းကိုယ်စားပြုသည်။
အစောပိုင်း Op-Ed ၏စာရေးဆရာများညစ်ညမ်းစားသုံးမှုနှင့် ပတ်သက်. "စိုးရိမ်ပူပန်မှုအတှကျအခြို့သောအကြောင်းရင်း" အသိအမှတ်ပြုနေစဉ်, ထက်ဝက်နီးပါးကသူတို့ဝေဖန်မှာ "လိင်ရုပ်ရှင်အသုံးပြုမှုအပြုသဘောသက်ရောက်မှု," ဆိုလေးနက်သောအန္တရာယ်အသေးအဖွဲအနေဖြင့်မီးမောင်းထိုးပြ။ ဒါဟာ FTND ကျောင်းများမှာသူတို့ရဲ့အလုပ်အတွက်အသိအမှတ်ပြုရန်ပျက်ကွက်ခဲ့သည်ဟုသူတို့ငြင်းခုန် "မျှမျှတတ view" ကိုဒီလိုမျိုးဖြစ်ပါတယ်။
သာ. ကြီးသော "ပျော်ရွှင်မှုကိုနှင့်ဝမ်းမြောက်ခြင်း" ကိုတစ်ဦးတည်းသာလေ့လာမှု, "တိုးမြှင့်လိင်," ကနေညစ်ညမ်းအကွာအဝေးကနေဆီကအကျိုးအမြတ်ကိုသူတို့ကျယ်ပြန်စာရင်းကို ကိုးကား. နှင့်တိုးတက် "တဦးတည်းရဲ့ကိုယ်ပိုင်အသွင်အပြင်နှင့်အတူနှစ်သိမ့်။ " ကျနော်တို့ကယုံကြည်ဖို့တောင်းနေကြသည်တစ်ခုတည်းကိုးကား၏အခြေခံတွင် ညစ်ညမ်း၏ထုတ်လုပ်မှုဖြစ်စေမြွက်ခြင်းမရှိဘဲ, "လျှော့ [es], အကြမ်းဖက်မှုနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစော်ကားမှု" က၎င်း၏စားသုံးမှုနေချိန်မှာအဆိုတော်များအတွက် -this "အဆင့်မြင့် Self-လေးစားမှု" ကိုအားပေးအားမြှောက် ခြောက်လလေ့လာမှုများ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးအမျိုးသမီးအဆိုတော်များ၏ပြဿနာများကိုတစ်ခုသို့မဟုတ်အပြည့်အဝအတည်ပြု 50 peer-ပြန်လည်သုံးသပ်လေ့လာမှုများ တိုက်ရိုက် porn ချိတ်ဆက် လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှုမှသုံးပါ။
အဆိုပါစာရေးဆရာတစ်ဦးထက်ပိုတိကျမှန်ကန်သိပ္ပံနည်းကျဆန်းစစ်မည်သည့်အနှုတ်လက္ခဏာအကျိုးသက်ရောက်မှုများ-ကိုးကားရှိခြင်းအဖြစ်တစ်ခုသာ "လိင်ရုပ်ရှင်ကြည့်ရှုအားပေးသောသူတို့၏အမျိုးအသေးငယ်တဲ့ရာခိုင်နှုန်း" အတည်ပြုကြောင်းအခိုင်အမာ "အမျိုးသမီးတွေ2ရာခိုင်နှုန်းကိုထက်လျော့နည်းယောက်ျား၏ထက်နည်း 0.05 ရာခိုင်နှုန်း, ။ " သူတို့ကကိုးကားခြင်းမရှိဘဲအဲဒီလို နှင့်ဖြစ်စေသည့် 2016 ဖော်ပြခြင်းမရှိဘဲ US porn အသုံးပြုသူ 28% မှာ (သို့မဟုတ်အထက်) သွင်းယူသောလေ့လာမှုဖြစ်နိုင်သော hypersexual ရောဂါများအတွက် cutoff ဒါမှမဟုတ် 2016 ဘယ်လ်ဂျီယံ (အလားအလာစွဲလမ်းလှုံ့ဆော်မှုနှင့် ပတ်သက်. အသုံးပြုသူများကိုသူတို့ပြဿနာများရှိသည်အသိအမှတ်မပြုဖို့နောက်ဆုံးအကြားပုံမှန်အားဖြင့်ဖြစ်ကြောင်းပေးထားကြောက်စရာကောင်းလောက်အောင်တိုးမြင့်မားသောနှုန်း,) porn အသုံးပြုသူ 28% ပြဿနာအဖြစ်သူတို့ရဲ့ porn စားသုံးမှု Self-အကဲဖြတ်ထားတဲ့အတွက်လေ့လာမှု။ ဒီနေသော်လည်း, Op-Ed ၏စာရေးဆရာများကြောင်းညစ်ညမ်းဆန့်ကျင်ဘက်ပြုမှသွားနှင့်အစား "ပင်အဓိကအားအနုတ်လက္ခဏာသက်ရောက်မှုရှိသည်မဟုတ်" ဘူး "အများအားဖြင့်အပြုသဘောသက်ရောက်မှု။ "
ဖြစ်ကြသည်ကိုကူး 75 peer-ပြန်လည်သုံးသပ်လေ့လာမှုများအနိမ့်ဆက်ဆံရေးမျိုးသို့မဟုတ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျေနပ်မှုဖို့နေ့စွဲ-ချိတ်ဆက်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကိုမှအထောက်အထားများ၏ -a သဘောအရဆိုလျှင် (ဟုတ်ကဲ့အများစုလည်းအပြုသဘောသက်ရောက်မှုဆန်းစစ်) ။ ဒါ့အပြင်ဖြစ်ကြောင်းမှတ် ချိတ်ဆက် 30 လေ့လာမှုများ porn လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာများစားသုံးမှုနှင့်အောက်ပိုင်း arousal, 55 လေ့လာမှုများ Documents ညစ်ညမ်းတင်းမာမှုသို့မဟုတ်လေ့နှင့်တစ်ဦးအပြည့်အဝ 20 သိပ္ပံနည်းကျပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း ကြောင်းညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုနှင့်အတူပြင်းထန်သောအန္တရာယ်များကိုမြဲမြံစေ။
ထိုသို့သောသုတေသနဤစာရေးဆရာများငြင်းခုန်, တစ်ဦးထက်ပိုသော "မျှမျှတတ" အကဲဖြတ်အတွက်ပယ်ချခံရဖို့သင့်၏။ ဆန့်ကျင်ဘက်အားဖြင့်၎င်းတို့၏ rosy ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာသဘောမတူသောသူတို့က, သူတို့စကားထဲမှာရိုးရှင်းစွာ "သိပ္ပံနည်းကျနည်းလမ်းမှတ်" သို့မဟုတ်လုံလုံလောက်လောက် "တိကျခိုင်မာစွာ" လေ့လာမှုများလုပ်ဆောင်ရန်ပျက်ကွက်ပါပွီ။
သောယခုလျှောက်ထားမလား 41 ထုတ်ဝေ neuroscience လေ့လာမှုများ ကိန်းဘရစ်ချ်ယေးလ်နှင့်မက်စ် Planck တူသောတက္ကသိုလ်များမကြာခဏညစ်ညမ်းအသုံးပြုသူများအများ၏ဦးနှောက်ထဲမှာပုံစံများရှာဖွေစူးစမ်းရာမှ? လုံးဝနီးပါးတိုင်းမှ neuroscience လေ့လာမှုကိုတွေ့လိုက်ပါတယ် စွဲလမ်းနှင့်ကိုက်ညီဦးနှောက်အပြောင်းအလဲများ, 28 လေ့လာမှုများစာရွက်စာတမ်းအပါအဝင် ာင်း သို့မဟုတ် cue- reactivity ကို, တဆယ်ရှစ်မှတ်တမ်းတင် ချို့ယွင်း prefrontal ဆားကစ် နှင့်မှတ်တမ်းတင်ရှစ် desensitization.
ဘယ်လိုရှစ်အာရုံကြောဆိုင်ရာသိပ္ပံပညာရှင်ကဤလေ့လာမှုများလျစ်လျူရှုနိုင်ခြင်းအထူးသဖြင့်အခါ, နားလည်ရန်ခက်ခဲသည် ခြောက်ဆယ်ကျော်အာရုံကြောဆိုင်ရာသိပ္ပံပညာရှင် နိဂုံးချုပ်ပါပြီ သူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဦးနှောက်ဒေတာညစ်ညမ်းရဲ့စွဲလမ်းအလားအလာထောက်ခံပါတယ်။ အမှန်စင်စစ် porn အသုံးပြုသူများအများ၏ဦးနှောက်ကနေသူတို့ရဲ့ဒေတာပြန်ဆိုတစ်ခုတည်းသောအသင်းမဟုတ်ရင်အဆိုပါ Op-Ed ၏ဦးဆောင်ရေးသားသူဦးဆောင်သောတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ဘယ်တော့လဲ ပြင်ပပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းဆယ်ပြန်လည်ပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်းပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခဲ့သည် ဤအချက်အလက်များ၏, သူတို့ကအသင်းအားလုံးစွဲလမ်းပုံစံများကိုသွင်ပြင်လက္ခဏာများအလွန်လေ့နှင့် desensitization ၏သက်သေအထောက်အထားများလျစ်လျူရှုခဲ့သည်ကောက်ချက်ချခဲ့ကြသည်။ ဦး ဆောင်ရေးသားသူ၏ဝေဖန်မှုများနှင့်ဆန့်ကျင်။ သူမ၏အဖွဲ့သည်ပုံမှန်မဟုတ်သောလေ့လာမှုသည်“ ညစ်ညမ်းသောညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းမှု” ဖြစ်ကြောင်းသက်သေသာဓကဖြစ်သည်။ ကြောင်းလေ့လာမှုအတွက်ပဲတက်မခံမရပ်ပါဘူး.
ဒီနေသော်လည်းဤစာရေးသူအတွက်ကြောင့်ငြင်းခုန် အမှန်တကယ်အများပိုင် ထိခိုက်စေ မဟုတ်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကိုမှလာပေမယ့်အနေဖြင့် ဒါဟာအန္တရာယ်ဖြစ်နိုင်ဖြစ်နိုင်သည်ကိုလူသိရှင်ကြားထားခြင်း! လူငယ်နှင့်အတူညစ်ညမ်းရဲ့အလားအလာပျက်ဆီးအကြောင်းမက်ဆေ့ခ်ျကိုမျှဝေဖို့, သူတို့က, အပြင်းအထန်တောင်းဆိုလူငယ်လည်းညစ်ညမ်းရဲ့ "အပြုသဘောဆောင်သော" သက်ရောက်မှုဝန်ခံတဲ့ "မျှမျှတတ" အမြင်စကားကိုနားထောငျသေချာစေရန်စစ်မှန်တဲ့စိုးရိမ်ရေမှတ်-ညှာတာမှုကိုအပြင်းအထန်တောင်းဆိုနေတဲ့ကျောင်းကိုအာဏာပိုင်များသည်။
စာရေးသူ၏အဆိုပြုချက်များသည်မည်မျှအတိုင်းအတာအထိရှိသည်ကိုဖော်ပြထားသည် သက်သေအထောက်အထားများ၏ကြံ့ခိုင်မှု ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေသုံးစွဲမှုနှင့်ဆက်စပ်သောဖြစ်နိုင်ချေရှိသောဘေးအန္တရာယ်များစွာကိုမှတ်တမ်းတင်ထားခြင်းဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤလှုပ်ရှားမှုကိုတက်ကြွလှုပ်ရှားသူများကားမည်သူနည်းဟုမေးမြန်းရန်ဖိအားပေးခံရသည်။ ထို့အပြင်ဤစာရေးဆရာများ၏နိဂုံးကိုကျွန်ုပ်တို့၏ကလေးများထံလက်ဆင့်ကမ်းပေးခြင်းဖြင့်မည်သူ့ကိုမျှအကျိုးပြုမည်နည်း။
၏အလငျး၌ မှတ်တမ်းတင် လူငယ်အပေါ်လူမှုရေး, စိတျပိုငျးဆိုငျရာ, သိမြင်မှု, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာသက်ရောက်မှုကျနော်တို့ကပညာပေးနှင့်ညစ်ညမ်းရဲ့အန္တရာယ်ကနေလူငယ်ကာကွယ်ဖို့အားကောင်းတဲ့, သက်သေ-based ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးချဉ်းကပ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့အချိန်ဖြစ်ပါသည်တင်ပြသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကလေးများမှာအနည်းဆုံးကြောင်းအများကြီးရထိုက်ပါတယ်။
[ဤ Op-Ed ရာ၌အများအပြားထပ်တိုးတောင်းဆိုမှုများမှတုံ့ပြန်မှုများအတွက်အောက်တွင်ကြည့်ပါ]
ရွှံ့ Olsen CEO နဲ့အတင်းအကျပ်ပြုတတ်သောညစ်ညမ်းပြဿနာများကိုရင်ဆိုင်နေရသူတို့အဘို့သစ်မူးယစ်ဆေးတိုက်ဖျက်ရေးအတွက်၏ပူးတွဲတည်ထောင်သူနှင့်တည်ထောင်သူ, ခဲတီထွင် Fortify ၏အနုပညာဒါရိုက်တာတစ်ဦးပညာရေးဆိုင်ရာထောက်ခံမှုအသိုင်းအဝိုင်းဖြစ်ပါတယ်။
GAIL ထမင်းစားခန်း, Ph.D ဘွဲ့ကို တစ်လူမှုဗေဒပါမောက္ခနှင့်အမျိုးသမီးရဲ့လေ့လာမှုတွေဘော်စတွန်အတွက် Wheelock ကောလိပ်မှာ, နှင့်ယဉ်ကျေးမှု Reframed, အညစ်ညမ်းယဉ်ကျေးမှုမှလူငယ်အတွက်ခံနိုင်ရည်နှင့်ခုခံရေးကိုတည်ဆောက်မယ့်ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့အစည်းတည်ထောင်သူသမ္မတဖြစ်ပါတယ်။
မာရိကအန်း Layden, Ph: D, ထိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ဒဏ်ရာ၏ဒါရိုက်တာနှင့် Psychopathology အစီအစဉ်နှင့် Pennsylvania ပြည်နယ်တက္ကသိုလ်မှစိတ်ရောဂါကုသမှုဌာနအတွက်သိမှုကုထုံးအဘို့အရေးစင်တာဖြစ်ပါသည်
ဂယ်ရီ Wilson က၏ဖန်ဆင်းရှင်ဖြစ်ပါသည် YourBrainOnPorn.com နှင့် "သင့် ဦး နှောက်မှသင့် ဦး နှောက် - အင်တာနက်ညစ်ညမ်းစာပေနှင့်စွဲလမ်းမှု၏သိပ္ပံပညာ။ "
ကို Jill Manning, Ph.D ဘွဲ့ကို တစ်ဦးလိုင်စင်အိမ်ထောင်ရေးနှင့်မိသားစုကုထုံး, ကော်လိုရာဒိုအခြေစိုက်သုတေသီနှင့်စာရေးဆရာဖြစ်ပါတယ်။ သူမသည်လတ်တလောတွင်လုံလောက်များအတွက်ဒါရိုက်တာဘုတ်အဖွဲ့အပေါ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ကလေးများနှင့်မိသားစုများအတွက်အင်တာနက်ကိုဘေးကင်းအောင်ထံအပ်နှံလုံလောက်, non-အမြတ်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
Donald ဟီလ်တန်, MD San ​​Antonio တွင်မှာတက္ကဆက်ပြည်နယ်ကျန်းမာရေးသိပ္ပံစင်တာတက္ကသိုလ်မှ neurosurgery တစ်ခုတွဲဖက်တွဲဖက်ပါမောက္ခများနှင့်အာရုံကြောခွဲစိတ်ကုဆရာဝန်များ၏အမေရိကန်အသင်းသူခငျြးတဖြစ်ပါတယ်။
ယောဟနျသဃ Foubert, Ph.D ဘွဲ့ကို, ဥက္ကလာဟိုးမားပြည်နယ်တက္ကသိုလ်မှကောလိပ်ကျောင်းသားဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီတစ်ခုပဒေသာပင်များလည်းပါမောက္ခဖြစ်ပြီး, ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံထိခိုက်ဘယ်လိုသစ်စာအုပ်၏စာရေးသူဖြစ်ပါသည်: ဆယ်ကျော်သက်လေးတွေ, လူငယ်လူကြီးများ, မိဘများနှင့်တရားဟောဆရာကိုသိရန်လိုအပ်ကဘာလဲ။
1 ။ သိပ္ပံဒဿန။ FTND "ကြောင်းပွိုပြီးနောက်စနစ်တကျသိပ္ပံပညာ "နှင့်" အရေးမစိုက် [ing] သိပ္ပံနည်းကျနည်းလမ်းအဓိပ္ပါယ်ကောက်လွဲမှားအောင်"ဟုအဆိုပါစာရေးဆရာအမည်ရ, သူတို့ကချိုးဖောက်ခဲ့ကြတောင်းဆိုအခြေခံမူမှတဆင့်လမ်းလျှောက်ရှည်အပိုဒ်သုံးဖြုန်း:
"သိပ္ပံနည်းကျနည်းလမ်းဖြစ်လျှင်ဤအယူအဆငြင်းဆန်ဖို့စမ်းသပ်ချက်အတွက်တစ်ဦး falsifiable အယူအဆဖွဲ့စည်းလိုအပ်သည်။ ဒေတာတသမတ်တည်းအဆိုပါယူဆချက်ငြင်းဆန်ရန်ပျက်ကွက်သာလြှငျတယူဆချက်သက်သေပြဘဲ, ထောက်ခံကြောင်းကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။"
ရပြီ! ထိုအညာဘက်အပေါ်။ မင်းကိုအရမ်းဝေးနေပြီ
သူတို့က "ကိုဆက်လက်အဆိုပါ FTND အက္ခရာ (က) ညစ်ညမ်းစွဲလမ်းသို့မဟုတ်အန္တရာယ်ရှိသောသောအယူအဆငြင်းဆန်ဖို့ရှာကြံတိကျခိုင်မာစွာစမ်းသပ်ခြင်းအဲဒီမှာဖြစ်တော်မူကြောင်းကိုအကြံပြု"
"(ဂ) မျှဆန့်ကျင်သက်သေအထောက်အထားများတွေ့ရှိခဲ့သည်ထားပြီး။ "
ရှစ်အာရုံကြောဆိုင်ရာသိပ္ပံပညာရှင်သက်သေအထောက်အထား၏ဤသဘောအရဆိုလျှင်ညွှန်ပြနေသည်ညှနျကွားခစျြလြူရှုမယ်လို့အဘယ်ကြောင့်ဒါဟာ baffling ရဲ့။
2 ။ ကိုယ်စားပြုမှုလေ့လာပါ။ အဆိုပါ Op-Ed ကရေးသားသူ "ဟုပြောလိင်ရုပ်ရှင်အသုံးပြုသူများသည်မည်သည့်ကိုယ်စားလှယ်လမ်းအတွက်နမူနာကို၎င်း, လေ့လာမှုများသူတို့ရဲ့လိင်ရုပ်ရှင်အသုံးပြုမှုနှင့် ပတ်သက်. ဘက်လိုက်နမူနာဒုက္ခဆင်းရဲသတင်းပို့အတူတက်အဆုံးသတ်မဟုတ်ခဲ့ကြ။ "
တကယ်တော့, 75 ကျော်လေ့လာမှုများကျွန်တော်တို့ရဲ့စာရင်း နှစ်ဦးစလုံး Cross-Section နှင့် longitudinal: လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာသို့မဟုတ်ဆက်ဆံရေးဟာစိတ်ကျေနပ်မှုနှင့်အတူညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှု correlating ကိုယ်စားလှယ်တစ်လမ်းအတွက်ဒီစိတ်ကျေနပ်မှုကိစ္စကိုနမူနာကြောင်းတည်းသောလေ့လာမှုများရှိပါတယ်။
3 ။ စွဲဘာသာစကားနှင့်ဒုက္ခဆင်းရဲ။ အဆိုပါစာရေးဆရာ "ဟုပြော'' စွဲလမ်း '' အဖြစ်အပြုအမူများ၏စိတ်ကူးမှတ်တမ်းတင်ထားပါတယ် သိသာထင်ရှားသောစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာထိခိုက်မှု."
သို့သျောလညျးသူတို့ကိုးကားလေ့လာမှု၎င်းတို့၏အပြုအမူစွဲလမ်းခဲ့ခံစားခဲ့ရသူတွေကိုရန်ပြုစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာထိခိုက်မှုအကဲဖြတ်ခဲ့ပါဘူး။ သူတို့ရဲ့လင့်ခ်တစ်ဦးညစ်ညမ်းစွဲစမ်းသပ်မှုအပေါ်ရမှတ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဒုက္ခဆင်းရဲနှင့်ဆက်စပ်သောတွေ့ရှိခဲ့ကြောင်းလေ့လာမှုတစ်ခုရသွားသည်။ ရိုးရှင်းစွာအ, ပြဿနာသည်အသုံးပြုသူများအတွက်မျှော်မှန်းထားခံရဖို့ဖြစ်သည့်ဒုက္ခဆင်းရဲများပိုမိုမြင့်မားအဆင့်ဆင့်ဆက်နွယ်နေကြောင်း porn စွဲ၏မြင့်မားသောအဆင့်ဆင့်ထား၏။ တစ်ဘို့ ဒီလေ့လာမှုကလစ်နှင့်ပြည့်ဝ၏ဝေဖန်မှု.
4 ။ စွဲဘာသာစကားနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှု။ အဆိုပါစာရေးဆရာ "ဟုပြောစွဲလမ်းစေ '' အဖြစ်အပြုအမူများ၏စိတ်ကူး'…ယောက်ျားလေးများစေခဲ့ပါသည် သူတို့ erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုရှိထင် သူတို့မကျင့်ရသောအခါ။ "
နောက်တဖန်မမှန်သော။ အဆိုပါ link ကိုအဘယ်သူသည်လုလင်4ရှုပ်ထွေးသောကိစ္စလေ့လာမှုများနှင့်အတူစက္ကူသွား ခဲ့ erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု (စာရေးသူတောင်းဆိုအဖြစ်သူတို့ ED ခဲ့ "ဟုယုံကြည်" မပါ) ။ ကြောင်းစာရွက်ထဲမှာညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုသို့မဟုတ် porn စွဲမဖျောပွထားရှိပါသည်။
5 ။ ညစ်ညမ်းနှင့်အမျိုးသမီးအခွင့်အရေး။ သူတို့က "ဟုပြောလိင်-ရုပ်ရှင်ကြည့်ရှု လည်းဆက်စပ်လျက်ရှိသည် သာတူညီမျှသဘောထားများနှင့်အတူ ... ။"
အထောက်အပံ့အဖြစ် '' သာတူညီမျှ '' ရှုမြင်သုံးသပ်ကြစာရေးသူအားဖြင့်ရည်ညွှန်းအဆိုပါလေ့လာမှု: Feminist ဖော်ထုတ်ခြင်း, အမျိုးသမီးများနေ့အမျိုးသမီးများအိမ်တွင်းနှင့်ကိုယ်ဝန်ဖျက်ပြင်ပတွင်အလုပ်လုပ်နေသောအာဏာရာထူးကိုင်ဆောင်။ လောကလူဦးရေကပိုလစ်ဘရယ်ဖြစ်လေ့နှင့်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုသိသိသာသာမြင့်မားတဲ့နှုန်းများ ဘာသာရေးလူဦးရေထက်။ ဒါဟာအဖြစ်မှန် porn အသုံးပြုခြင်းနှင့် (ဒီလေ့လာမှုအဖြစ်သတ်မှတ်ပါတယ်ဘယ်အရာကို) "သာတူညီမျှ။ " တကယ်တော့အတွက်အကြားတစ်ဦးပိုမိုအားကောင်းဆက်စပ်မှုထုတ်လုပ်ရှိပါတယ် ၃၅ ခုကျော်သည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများအသုံးပြုခြင်းအားအမျိုးသမီးများအပေါ်ထားရှိသည့်“ မညီမျှသောသဘောထားများ” နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသည်.
6 ။ ညစ်ညမ်းခြင်းနှင့်အဆင့်မြင့်ပညာရေး / ယာနျဘာသာတရားကို။ အဆိုပါစာရေးဆရာ "ဟုပြောလိင်-ရုပ်ရှင်ကြည့်ရှု လည်းဆက်စပ်လျက်ရှိသည် မြင့်မားသောပညာရေး၊ ဆုတောင်းခြင်းနှင့်ဘာသာရေးကိုပိုမိုမြင့်မားစွာအသုံးပြုခြင်းနှင့်လိင်ကုထုံးများတွင်အများအားဖြင့်အသုံးပြုကြသည်။ "
စာရေးသူများပေးသည့်အချိတ်အဆက်သည်လေ့လာမှုတစ်ခုတည်းမှတင်ပြသော“ သာတူညီမျှဝါဒ” ဆက်စပ်မှုကိုသာရည်ညွှန်းသည်။ ထို့အပြင်လေ့လာမှုများစွာသည်ဆန့်ကျင်သောရလဒ်များကိုအစီရင်ခံသည်။ ညစ်ညမ်းသောလိင်စိတ်သဘောထားများ၊ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13.
7 ။ diagnostic လက်စွဲ။ စာရေးသူဖော်ပြခဲ့တဲ့သော ICD (ရောဂါများအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာခွဲခြားရေးနှင့်ဆက်စပ်ကျန်းမာရေးပြဿနာများ) မှရိုသေလေးစားမှုနှင့်အတူအရေးကြီးသောအချက်လာမည့် ICD-11 များအတွက်ရောဂါအဆိုတင်သွင်းကြောင်း "compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ Disorder"ဖြစ်သည့်အတွက်" "ဟုအဆိုပါအသိအမှတ်ပြု" ကျဉ်းသက်တမ်းလိင်စွဲလမ်း။ "
ရှင်းနေသည်မှာနိုင်ငံတကာဆေးဘက်ဆိုင်ရာလယ်မှ neuroscience နှင့်အခြားသက်သေအထောက်အထားများ၏သဘောအရဆိုလျှင်၏ညှနျကွားထဲမှာရွေ့လျားနေသည်။ အချို့သောအသုံးပြုသူများသည်များအတွက်အန္တရာယ်လျှင်မြန်စွာအများပြည်သူတို့မျက်စိထဲမှာဖုန်မှုန့်ကန်ဖို့လက်ရှိတဦးတည်းတူသောအားထုတ်မှုရှိနေသော်လည်းနွမ်းနေသည်အဖြစ်ညစ်ညမ်းစွဲများ၏တရားဝင်မှုနှင့် ပတ်သက်. သံသယ။ စကားမစပ်, ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ရဲ့ ICD တစ်အဖြေရှာတဲ့လမ်းညွှန်အဖြစ်ခြေလျင်-ဆွဲ Diagnostic နှင့်စာရင်းအင်းလက်စွဲ (DSM) "outranks" ။ ထို ICD ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင်စိတ်ရောဂါအရှိဆုံးအသုံးများခွဲခြားဖြစ်ပါသည်, နှင့်မျှမထိုကဲ့သို့သောလုပ်ပိုင်ခွင့်ကိုခံစားရသော DSM-5 diagnoses, ဆန့်ကျင်အဖြစ်က၎င်း၏ရောဂါရှာဖွေ codes တွေကိုအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာသဘောတူစာချုပ်အားဖြင့်အခြားနေရာများတွင်အမေရိကန်တွင်အသုံးပြုရန်ခွင့်ပြုထားသည့်နှင့်နေကြသည်။ DSM ဝါရင့်အားဖြင့်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းလုပ်အဖြစ်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကနဦးပြန်ကြားချက်လက်ရှိအဖြေရှာတဲ့လက်စွဲထက်ကို standalone diagnoses အတွက် codes တွေကို descriptive ရည်ညွှန်းသောအခိုင်အမာ, မမှန်ကန် စိတ်ရောဂါရစ်ချတ် Krueger, MD.
Gary Wilson Memorial Livestream ယခုမှစတင်သည်- t.co/LfrHFcWhWy t.co/n9EKIM4EFG
ကျွန်ုပ်တို့သည် တစ်နာရီမပြည့်မီတွင် စတင်ပါသည်။ LIVE မှာ ပါဝင်နိုင်မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။ t.co/mvl1z8cizC